Uhlinzeka abantwana ngetiye namabhisikidi - Ilanga News
Home Izindaba Uhlinzeka abantwana ngetiye namabhisikidi
Uhlinzeka abantwana ngetiye namabhisikidi
UBathabile Dladla uthi ukukhula eswele yikhona okumkhuthazayo
USEPHENDUKE umSamariya olungileyo uNkz Bathabile Dladla, owenzela izingane ikhofi namakhekhe mahhala ngaphambi
kokuba ziqale ukufunda. Lapha uthathwe etafuleni asuke ezenzela kulona. IZITHOMBE NGU: SABELO MASUKU
AKAKUGQIZI qakala ukuhlekelwa ukuthi uqede isikole waya eDurban University of Technology (DUT), wabuya neziqu zePublic Relations owesifazane waseTrenance Park, eVerulam, ongasebenzi, osephenduke umSamariya onesihawu njengoba enzela izingane zesikole itiye namakhekhe ngemali ayenza ngokudayisa amaswidi namakhekhe emgwaqweni.
UNkz Bathabile Dladla (32), laba bafundi ubenzela mahhala konke lokhu yize etabalasa ngasemalini. Unetafula adayisela kulona ukuze akwazi ukusiza lezi zingane, iningi lazo eziphuma emindenini ehlwempu, ikakhulukazi ezenza umatikuletsheni.
Phezu kwalo msebenzi awenza-yo, usengcupheni yokuba angasuswa lapho edayisela khona ngoba akanawo amaphephamvume ayo, kodwa usesifakile isicelo. UNkz Dladla akangcini nje ngokwenza ikhofi, kodwa ubuye asize nezinga-ne ezincane ezisuke ziya esikoleni azigcobe uVaseline, aphinde aziphe nokudla mahhala.
Izolo ngoLwesithathu ILANGA livakashele uNkz Dladla ukuyozizwela ngalo msebenzi ongajwayelekile awenzayo. Ulitshele ukuthi iningi lezingane alisizayo ngelisuka emakhaya ekuseni lingadlile ngenxa yokuqala ekuseni ukufu-nda, ezinye ngezivela emakhaya ahlwempu.
Uthe ubunzima bokungabinayo into yokudla nemali yokufunda okumenze wacishe washiya eDUT, yibona obumgqugquzele kakhulu ukuba alekelele izingane ezivela emphakathini wangakubo.
“Ngesikhathi ngisafunda enyuvesi, ngibhekane nobukhulu ubu-nzima obungenze ngacishe ngashiya ngingakaziqedi izifundo zami. Isimo ebengivela kusona ekhaya, besingekho sihle neze. Ekhaya bebengasenayo imali yokungiqhuba neyokuba ngithenge ukudla.
“Indlela obekukubi ngayo, esikoleni bengidla amakinati, ngiphuze ikhofi izinsuku zilandelana ukuze ngifunde kukhona okusesiswini.
“Kuze kwangenelela omunye wothisha ongisizile nakuba ngiziqedile izifundo zami ngathola neziqu,” kusho yena.
Uthi esezitholile iziqu, uzamile ukuthola umsebenzi kodwa kunhlanga zimuka nomoya, okuyilapho ebone khona ukuthi makaqale azidayisele amaswidi nama-chips ukuxosha ikati eziko.
Uthi kungaleso sikhathi lapho ebone khona izingane ebezivuka ekuseni ziye esikoleni zicela kuyena ngoba zingadlile. “Lezi zingane ububona ngisho ukhuluma nazo ukuthi isimo sibi, bekuthi uma ngizibuza zingitshele ukuthi kazidlile.
“Ngibone ukuthi kule madlana engiyithola ngokudayisa amaswidi, mangithenge ikhofi namakhekhe engizowanikeza izingane ngapha-mbi kokuba ziqale ukufunda ngoba ngiyabazi ubunzima bokufunda ulambile.
“Ezinye ubuke uzibone zipha-shile, kungekho okokugcoba, okwenze ngabona ukuthi kumele ngithenge uVaseline ukuze njalo uma zidlula, ngizigcobe – ikakhulukazilezi ezincane – besezidla ngaphambi kokuya esikoleni,” kusho yena.
Yize enza lo msebenzi, kodwa uthi zikhona izingqinamba abhe-kana nazo njengoba sekuke kwaba nezikhalo zokuthi le ndawo asebe-nzela kuyona igcina izigebengu. Uthi angakuthokozela ukuthola noma yikhonteyina ukuze ezoqhu-beka nokusiza izingane.
“Abantu abaningi bayangihleka ukuthi ngiqede iminyaka eminingi ngifunda, kodwa kangisebenzi, kunalokho ngenzela izingane ikhofi.
“Lokho angikugqizi qakala ngoba ngiyawuthanda umphakathi wangakithi futhi ngiyazi ukuthi ngiyasiza. Ngiyafisa ukuthola noma ikhonteyina engizosebenzela kuyona, nezingane zithole indawo ekahle ezizodlela kuyona,” kuphetha yena.
Previous articleUsole izidakamizwa odlwengule ingane (7)
Next articleUshiywe wumfazi uNala wodumo